UJordi Sierra i Fabra: izincwadi esincoma ukuthi uzifunde | Izincwadi Zamanje
Ngaphandle kokungabaza, omunye wababhali baseSpain abasebenza kakhulu futhi osebenzayo nguJordi Sierra i Fabra, obhale imisebenzi engaphezu kuka-500 kusukela esemncane kakhulu. Eqinisweni, kunezincwadi zikaJordi Sierra i Fabra zazo zonke izinto ezithandayo, futhi eziningi zazo zisetshenziswa ezikoleni noma ezikhungweni zokwenza umsebenzi wombhalo noma ukuphawula.
Kodwa, Jordi Sierra i Fabra uyaba ubani? Iziphi izincwadi ozibhalile? Kungani kwaziwa kangaka? Siphendula yonke leyo mibuzo engezansi.
1 Ngubani uJordi Sierra i Fabra
2 UJordi Sierra i Fabra: izincwadi zakhe
2.1 Izinkambu ze-Strawberry
2.2 Ukubulawa kukathisha wezibalo
2.3 Izincwadi zikaJordi Sierra i Fabra: Kafka nodoli ojikelezayo
2.4 Izincwadi zami (zokuqala) ezingama-400: izikhumbuzo zemibhalo kaJordi Sierra i Fabra
2.5 Izincwadi zikaJordi Sierra i Fabra: Umtapo wolwazi wezincwadi ezingenalutho
2.6 Izincwadi zikaJordi Sierra i Fabra: Isikhumba sememori
Ngubani uJordi Sierra i Fabra
UJordi Sierra i Fabra ungumbhali waseSpain ongcwele. Wazalwa ngo-1947 eBarcelona futhi ubhale izinhlobo ezahlukene zemibhalo, njengamanoveli, izinkondlo, ama-eseyi noma izindaba ezimfishane. Kodwa-ke, kusencwadini yezingane nentsha lapho athola khona impumelelo yakhe enkulu.
Okunye okungaziwa ngabaningi ngalo mbhali ukuthi uyazifela nangomculo we-pop, waze wafinyelela ezingeni lokuthi wayesebenzela omagazini neziteshi zomsakazo ngaleso sihloko esithile. Vele ukuhlanganisa ngokuphelele nomsebenzi wakhe njengombhali.
Namuhla UJordi Sierra i Fabra waziwa hhayi kuphela eSpain, kodwa naseLatin America. Futhi impilo yakhe ibingeyona "into enhle" ukusho.
Umbhali ubenezinkinga eziningi eseyingane ngoba ubenamalimi futhi lokho bekusho ukuthi abaningi afunda nabo bebemkhethisa. Kwenzeka into efanayo nasemndenini wakhe, ecindezelwa nguyise uqobo. Ngakho-ke, wanaka konke ezincwadini futhi wayengumfundi ophoqelelayo.
Lapho eneminyaka eyisishiyagalombili wehlelwa yingozi enkulu futhi kusukela eneminyaka eyishumi kuya kwengu-10 waqala ukubhala izindaba zakhe zokuqala. Cishe zonke zazibonakala ngokuba namakhasi angaba yikhulu, yize eneminyaka engu-12 wakwazi ukuqeda elilodwa lamakhasi angama-15.
Ufundele ukuba ngumuntu onzima ngenxa yesibopho sikayise, kodwa-ke, ayekuthanda ukubhala nokulalela umculo. Eminyakeni engama-21, iNkantolo Yomthetho Yomphakathi yamsayinisa ngoba wayebhala kumagazini oyimfihlo nokuholele ekutheni kuhoxiswe ipasipoti yakhe.
Ngemuva kokuphikelela okuningana, wathola umsebenzi wokuba umhleli kamagazini ngo-1968. Nokho, akugcinanga lapho; Wenza isikhathi sokubhala udaba eLa Prensa de Barcelona naseNuevo Diario de Madrid. Wabuye wabamba iqhaza njengomqondisi kwi-Disco Exprés yamasonto onke (eyathatha iminyaka eyi-8) futhi incwadi yakhe yokuqala kwakungeyomculo, ngo-1972. Kwakungowe-1962-72 Umlando wePop Music.
Wayaziwa kakhulu endimeni yezomculo kangangokuba abanye omagazini abaphambili bomculo babenaye eqenjini labo: Top Magazine, Extra, Popular 1, Super Pop ...
Ngaphandle kwalencwadi (nezinye eziningi ezafika), ekulandiseni nase-eseyi wadlala indima yakhe yokuqala nge-El mundo de las ratas doradas, ngo-1975; ngenkathi izincwadi zentsha zazingeke zifike ngo-1981 nge-El cazador.
UJordi Sierra i Fabra: izincwadi zakhe
Ukukhuluma nawe ngokulandelayo ngazo zonke izincwadi ezibhalwe nguJordi Sierra i Fabra kungaba ngumsebenzi ongaqondakali. Futhi kungenxa yokuthi ungumbhali wezincwadi ezingaphezu kwama-500, ebesingakwazi, noma ngabe besifuna, ukuphawula kuzo zonke zazo ngenxa yekhathalogi ebanzi kangaka.
Noma kunjalo, singenza i- Ukukhethwa kwalokho esikucabangayo yizincwadi ezinhle kakhulu zombhali. Vele, ngeziningi kangaka, akunakwenzeka ukuzimboza zonke noma ngisho nokukhetha injongo, njengoba ezinye zizofana nezinye izincwadi. Kepha kithi, sikhethe okulandelayo:
ULuciana yintokazi esukela eminyakeni yama-90 ehlaselwe umhlaba wezidakamizwa, ize iwele kwikhoma. Ngakho-ke, okuzama umbhali ngomsebenzi ukusiza abantu abasha ukuthi qonda okulungile nokungalungile, okuhle nokubi emphakathini.
Ukubulawa kukathisha wezibalo
Ngubani owayengafuni ukubulala uthisha wabo wezibalo ngesinye isikhathi? Yize uJordi Sierra i Fabra ezincwadini zakhe engafuni ukunikeza imibono yokwenza izinto ezimbi, singathola indaba ehlekisayo.
Kuyo uzohlangana nabafundi abathathu abenza kabi ezibalweni. Ngakho-ke uthisha uzama ukubethula ngesimo lapho bafuna ngempela ukuba nentshisekelo yokuxazulula: ukufa.
Ngalesi sizathu, uphakamisa ukufa kwakhe nemiyalo yakhe ngamanothi nangezinkomba, ukulungiswa kwecala.
Izincwadi zikaJordi Sierra i Fabra: Kafka nodoli ojikelezayo
Kulokhu umbhali usebenzise umcabango wakhe ukudala udumo olukhulu kumbhali uKafka. Futhi ngalokhu wayidala le ndaba, lapho kutshelwa khona ukuthi uKafka wakhuluma kanjani nentombazane eyayikhala epaki. Lapho, wambuza ukuthi kwenzekeni kuye futhi intombazanyana yamtshela ukuthi ulahlekelwe unodoli.
Ishukunyiswa yileyo ntombazane, Uthathe isinqumo sokuqamba umlingiswa ka "The Doll Postman", insizwa ebisesiqiwini futhi obefanele ukuletha umyalezo ovela "kudoli" wakhe.
Ngakho-ke, uJordi Sierra i Fabra encwadini yakhe waphinde wenza indawo yesehlakalo kanye "nezincwadi" ezazibhaliwe.
Vele, kufanele sikhumbule ukuthi akuyona into eyenzekile ngempela (ngaphandle kwesigameko sentombazane, umfelokazi wakhe aphawule ngaso).
Izincwadi zami (zokuqala) ezingama-400: izikhumbuzo zemibhalo kaJordi Sierra i Fabra
Umbhali uhlanganise kule ncwadi izihloko zezincwadi zakhe zokuqala, izizathu ezamholela ekutheni azibhale, kanye ne- Ama-anecdotes owakhumbulayo kusukela kuleyo minyaka yokuqala.
Izincwadi zikaJordi Sierra i Fabra: Umtapo wolwazi wezincwadi ezingenalutho
Ungacabanga ukuthi emtatsheni wezincwadi izinhlamvu zezincwadi zaqala ukuwa? Ngoba, njengesitshalo esibunayo, izincwadi zizoqala ukufa? Kulokho uJordi Sierra i Fabra akucabangayo ngale ncwadi, idolobha lapho kungafundi muntu nezimo ezingajwayelekile ziqala ukwenzeka. Kepha kancane kancane bazothola okuthile okubaluleke kakhulu.
Izincwadi zikaJordi Sierra i Fabra: Isikhumba sememori
Kungumdlalo lapho asethula khona kumlingiswa osemusha wase-Afrika oshonelwe ngunina. Kodwa-ke, ubaba wakhe akahlali naye, kepha unquma ukumthengisa ukuze axazulule izinkinga zakhe zezezimali.
Ngakho-ke, encwadini ungakwazi uhlangabezana nobunzima le nsizwa ehlupheka ngokuba ngumAfrika futhi ihlupheka. Ngemiyalezo ethile ejulile futhi ikwenze ucabange, okufunwa umbhali ukwenza omncane aqonde (ngoba yincwadi yemibhalo yezingane) ukuthi asikho isidingo sokwahlulela ngohlanga, ibala lesikhumba, njll. (neminye imilayezo esiyigcinayo ukuze singakugcini uphapheme).
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » UJordi Sierra i Fabra: izincwadi esizincomayo
Ngiyamthanda lo mbhali.Ngakuthola ngenkathi ngifunda i-EL CARTERO de MUÑECAS, ukudala udumo olukhulu kuKAFKA, lapho-ke sengifunde nezinye izincwadi zakhe zentsha, yize sengineminyaka engama-78 ubudala.